Vondrona Afrikanina : Firenena 54 hanao sonia ny ZLECA any Kigali -
AccueilSongandinaVondrona Afrikanina : Firenena 54 hanao sonia ny ZLECA any Kigali
Vondrona Afrikanina : Firenena 54 hanao sonia ny ZLECA any Kigali
Mizotra any Kigali, Rwanda, amin’izao fotoana izao ny fivoriambe tsy ara-potoana eo anivon’ny Vondrona Afrikanina (UA) izay handinihina manokana ny Zone de Libre-Echange Continentale Africaine na ny ZLECA. Manana solontena amin’izany i Madagasikara amin’ny alalan’ny minisitry ny Raharaham-bahiny (MAE), Henry Rabary-Njaka.
Araka ny fampitam-baovao, noho ny voina mahazo ny Malagasy amin’izao fotoana izao, taorian’ny fandalovan’ilay rivodoza Eliakim farany teo, dia nanapa-kevitra ny tsy hanatrika izany fivoriambe tsy ara-potoan’ny UA izany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa nisafidy ny hijanona ho eo anilan’ny vahoaka. Na izany aza anefa, dia nanendry ny minisitry ny MAE izy misolo tena azy amin’izany hetsika goavana any Kigali Rwanda, izany.
Raha ny fandaharam-potoana amin’ity fivoriambe tsy ara-potoan’ny UA ity, dia anio no hiroso amin’ny fifanekena amin’ny fifanaovan-tsonian’ny fametrahana ny ZLECA aty Afrika ireo Filoham-pirenena afrikanina. Amin’izany ihany koa mantsy no hisarihana ireo firenena afrikanina 54 hiditra ao amin’ny Faritra hifanakalozana malalaka ara-barotra (zone de libre-échanges commerciaux).
Ankoatra izay, mandritra izany ihany koa no hanatanterahana ny fivorian’ireo minisitry ny Raharaham-bahiny afrikanina amin’ny fanomanana ny fihaonambe na fivoriamben’ireo Filoham-pirenena sy ireo governemanta.
Anisan’ny zava-dehibe dinihina mandritra ity fivoriambe tsy ara-potoan’ny UA ity ny mahakasika ny fampandrosoana sy ny fifandraisan’ireo firenena afrikanina eo amin’ny tontolo ara-barotra, izay mifanaraka hatrany amin’ny lohahevitra izay naroso.
Etsy andaniny, dia nanambara ny filohan’ny fihaonambe any Kigali, Rwanda, fa zava-dehibe ny fisian’io fivoriambe io, izay singa iray amin’ny fikarakarana ireo fihaonambe kaontinantaly isan-tokony.